Nody maina satria tsy nahalala fomba | news2dago |
Nody Maina Satria Tsy Nahalala Fomba
news2dago 11 Jolay, 2009 09:24 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Mbola mitsakotsako ny dia nitsefotra tany bruxelle ankehitriny ireo mpomba ny fat. Niakam-peo ery ilay mpanao gazety malaza iray izay ao @ radio tsy miankina iray nitambatamba mafy mihitsy ranamana nanenjika ireto mpamatsy vola!!! fotoana hono izao hanomezana lamosina azireo!!! sy hitodihina @ lalam-bola hafa. Dia hoy aho oe izany ve no antony andadizana any @ saodiana. Mora anie ny miteny sy manejika teny @ kianja ny 13 mai natao daholo izao fanamelohana rehetra izao kay rehefa tena mitondra ny baolina enao tsy hita akory izay apoaka.
Hany ka nanao fanambarana haingana omaly fa haroso ny fifidianana alohan'ny faran'ny taona ary hampanao fitsapan-kevimbahoaka koa hono @ volana septembra. Dia nanipy baolina ny anao lahy fa tsy zakany intsony ny tsindry mahazo azy ny vola tsy misy ho ampiasaina ny tena afabaraka eo @ tantara. Ny mpanao politika nanosika azy etsy andaniny samy manadio ny tenany ankehitriny. Taratra izany @ fihetsika sasany ataony eo ohatra i Rolland Ratsiraka izay mahazo vahana satria tsy mandray anjara mivantana @ tetezamita toy izany koa ny mpiakambana sasany ao @ fat. Misongadina @ ireny koa ingahy monja roindefo milaza fa mahazo maneho hevitra hono rehefa tsy manakorotana na koa ny oe tsara tohizana ihany ny dinidinika ambony latabatra. Mazava ho azy fa hilatsaka ireo @ fifidianana dia efa mizara ny vato e. Ry lahiniriko sy ny tariny koa tsy hanaiky eo.
Ny vahoaka etsy andaniny dia manara maso akaiky dia akaiky ny fanampahan-kevitra raisina. Ny mpanao politika sasany izay tena tsy ho lany sy tsy sahy mifanatrika @ vahoaka @ fifidianana no hany mbola manome vato mafana an'ity filoha ny fat ity ankehitriny maporisika azy hilatsaka sy manoro vohona hatrany. Diso fantatry ny olona izy ireo tsy mila tonona eto intsony. Hisy raharaha eto raha tena mangarahara ny fifidianana hatao. Satria mety hiverina eo ilay iraika lahy taloha hindramiko kely @ Rossy iny hira iny aloha hanesoko azy koa. Ho hita eo @ izay izay tena mbola mamim-bahoaka. Ary hanatra ho an'izay mikasa hanongam-panjakana ity nataon'i Andry Rajoelina sy ny forongony ity oe mila malala fomba fa tsy manadran-tena ho prezidà kanefa tsy lanim-bahoaka.